संघीयताअनुकूल बजेटको अपरिहार्यता- विचार - कान्तिपुर समाचार
तुलनात्मक रूपले बढी स्रोत र साधन सबभन्दा पछाडि परेको/पारिएको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सुगम क्षेत्रमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको छ । दूरदराजमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन् तर ठूलठूला सहरी क्षेत्रहरूमा भ्युटावरहरू बन्दै छन् ।
वैशाख २२, २०७८ खिमलाल देवकोटा
कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरको त्रासदीमा पनि सिंहदरबारमा अलग्गै रौनक छ । बजेट तर्जुमाका समयमा एकात्मक व्यवस्थामा हुने र अहिलेको रौनकमा तात्त्विक भिन्नता छैन । योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि सिंहदरबारका मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा साबिककै जस्तो भीडभाड छ ।
सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्दा पनि सिंहदरबारमा नधाई योजना आउँदैन/पार्न सकिन्न भन्ने मनोवृत्तिमा खासै सुधार भएको छैन । अझै पनि योजनाको ठूलो हिस्सा भनसुन र तजबिजकै आधारमा प्राप्त हुने गर्छ । विगतसँग तुलना गर्दा सामान्य रूपमा परिवर्तन भए पनि गुणात्मक सुधार भएको छैन । भनसुन र तजबिजका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने सिंहदरबारको रोग एकाधबाहेक सबै प्रदेशमा छ । अधिकांश पालिकामा पनि यस्तै समस्या रहेको पदाधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।
सिंहदरबारजस्तै प्रदेश र स्थानीय तह पनि अहिले बजेटको तयारीमा छन् । सिंहदरबारको बजेटलाई प्रदेशले पछ्याउने अनि सिंहदरबार र प्रदेश दुवैलाई स्थानीय तहले पछ्याउने संविधान तथा कानुनको आशय हो । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा यो आलेख संघीयताअनुकूल बजेट तर्जुमाका केही पक्षमा केन्द्रित छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण
राज्यको पुनःसंरचनापश्चात् तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तर सरकार सञ्चालनको पहिलो महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारीको न्यूनता प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । कर्मचारीको समायोजन त भयो तर उचित व्यवस्थापन भएको छैन । दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जस्तो, सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी २४ जना भएकामा १ जना मात्र कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको गुनासो छ । अन्य प्रदेशमा पनि समस्या झन्डै यस्तै छ ।
स्थानीय तहकै सन्दर्भमा, जनतासँग सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । कतिपय स्थानमा त कार्यालय सहयोगीले समेत वडासचिवकै काम गर्नुपरेको पालिकाका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको नामै तोकेर पूर्ति गरिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । यसले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको थप समस्या सृजना भएको छ ।
स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको गठन भएको छ । तर कानुनको अभावले प्रदेशका यी आयोगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । केही प्रदेशका आयोगले काम अगाडि बढाए पनि पर्याप्त कानुनी आधार नहुँदा अदालतबाट व्यवधान भएको छ । वडा तहसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत अनुमोदित यो विधेयक स्वीकृत गरी कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधानार्थ लाग्नु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा रहेका यी समस्याको निराकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजता
संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हकमा स्वतः अमान्य हुनेछन् । रिट परेमा यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ला तर साबिक एकात्मक व्यवस्थाका अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा पुराना धेरै कानुन संविधानअनुकूल छैनन् । जस्तो, कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा सरकारले झन्डै ६० वर्ष पुरानो कानुन ‘संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२०’ लाई आधार लिएको छ ।
राज्यको मूलभूत संरचनामा परिवर्तन भएपछि पुराना सबै कानुनको मूल भावना/प्रस्तावनामै सुधार गर्न र सबै कानुन संविधानअनुकूल बनाउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले एकल अधिकार र साझा अधिकारमा रहेका कानुनहरू २०७५ चैतसम्म तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजामती सेवा ऐन त फागुनमै सक्ने थियो, तर परिषद्को निर्णय निर्णयमै सीमित रह्यो । कार्यान्वयन भएन ।
प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले धमाधम कानुनहरू बनाइरहेका छन् । कतिपय कानुन अधिकारक्षेत्रसँग बाझिएका छन् भने, कतिपयको गुणस्तरमा समस्या छ । घरबहाल कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोतजन्य करलगायतमा सरकारका विभिन्न तहबीच विवाद छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित केही कानुन बने पनि धेरैजसो बनाउन बाँकी छन् । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनसँगै कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्न जरुरी छ ।
चुस्त संस्थागत संरचनाको निर्माण
शासकीय सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो— संस्थागत संरचना । डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकासहित कतिपय पालिकामा केन्द्र विवादका कारण पालिकाको भवन निर्माणलगायतको काममा अवरोध छ । कैयौं वडामा वडा कार्यालयसमेत छैन । पालिकासहित वडा कार्यालयको संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान जान आवश्यक छ । सिंहदरबारका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेपछि संघीय स्तरमा संस्थागत संरचनाहरू चुस्त हुनुपर्थ्यो/पर्छ । तर विभिन्न परियोजनाका नाममा संघीय स्तरमै अनावश्यक रूपमा धेरै संस्थागत संरचना थप्दै लग्ने प्रवृत्ति देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ । यस्ता संस्थागत संरचनाका कारण प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भइरहेको छ भने, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले पालिकासम्म सडक बनाउँदै हिँडेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपालको संघीयता प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि समन्वय र सहकार्यमा आधारित हो । संघीय सरकारले संस्थागत संरचनाहरू घटाउँदै लग्नुको साटो विभिन्न परियोजनाका नाममा बढाउँदै लग्ने र प्रदेशले पनि संघीय सरकारकै स्वरूपमा धमाधम संस्थागत संरचना थप्दै लग्ने स्थिति छ । यसको निराकरण जरुरी छ । नेपालको संघीयतालाई चुस्त बनाउने र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रीको संख्यामा प्रदेशसभाको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी पुनर्विचारसमेत जरुरी छ । भारतको दिल्ली सहरमा ३ करोड जनसंख्या छ, जबकि दिल्ली सरकारमा ७ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर नेपालको संविधानमा प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । संविधानतः वाग्मती प्रदेशमा २२ जना र प्रदेश २ मा २१ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्छन् । १५ लाख मात्र जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशले ८ जना र २५ लाख जनसंख्या भएको गण्डकीले १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउँछन् । अहिले प्रदेशमा सरकार राख्ने/हटाउने खेल छ । यही खेलबीच केही प्रदेशले मन्त्री र मन्त्रालयको संख्यामा समेत वृद्धि गरेका छन् । बाँकी प्रदेशले पनि यसको सिको नगर्लान् भन्न सकिन्न ।
मन्त्री/मन्त्रालयसहित काम र जिम्मेवारीका आधारमा तीनै तहका सरकारका संस्थागत संरचनाहरूको पुनरवलोकनसमेत जरुरी छ । संघीय स्तरमा भएका संस्थागत संरचनाहरूको कम्तीमा एकचौथाइले घटाउनुपर्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि जथाभावी संस्थागत संरचनाहरू बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । तहगत अन्तरसमन्वयका आधारमा संस्थागत संरचनाहरूलाई चुस्त बनाउने दिशामा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड
सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र हैन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरिकाले अनुदान वितरण गर्ने, पुँजीगत शीर्षकको बजेट चालुमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ ।
यसै गरी वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणको साटो अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको, वार्षिक खरिद गुरुयोजनाबिना खरिदका कामहरू हुने गरेको, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गर्ने गरिएको, उपभोक्ता समितिबाट पनि जटिल प्रकृतिका कामहरू गराउने गरिएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखा प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता समस्याहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता समस्याको निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रभावकारी स्थानीय सेवा प्रवाह
स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेह बनाउन स्थानीय तहको अनुदान वितरणमा कार्यसम्पादन मापनलाई पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्नुपर्छ । यसका लागि कानुनी पक्षमा पनि केही सुधारको आवश्यकता छ । स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर विगतमा असार १० मा ८३ पालिकाले बजेट पेस नगरेको स्थानीय तहका संघ/महासंघले जनाएका थिए । यी ८३ पालिकामध्ये ४४ वटा त प्रदेश २ का थिए । कानुनतः बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । सामान्य प्रशासनिक खर्चमा यसले त्यति असर नगर्ला तर विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा त एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन । आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा दुई महिना बाँकी छ । तर दुर्भाग्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का ८ पालिकाले वैशाख १८ सम्म पनि बजेट पेस गरेका छैनन् ।
समयमै बजेट पेस नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, आयव्ययलगायतका विवरण सार्वजनिक नगर्ने, वार्षिक प्रगति समीक्षा र वार्षिक तथा चौमासिक विवरण पेस नगर्ने, चल–अचल सम्पत्तिहरूको लगत नराख्नेलगायतका आधारमा प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यमा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मापन जरुरी छ । स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादन मापनमा आबद्ध गर्ने र राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेलाई अतिरिक्त थप अनुदान र कमजोरी गर्नेलाई अनुदानमा कटौती गर्ने, कटौती भएको अनुदान प्रदेशकै राम्रो काम गर्ने पालिकालाई दिने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ । यसले पालिका–पालिकाबीच काममा प्रतिस्पर्धासमेत गराउँछ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूको प्रतिवेदन हेर्दा प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकाहरूको शासन प्रणाली (वित्तीय अनुशासन र सुशासनसहित) अन्य प्रदेशका तुलनामा कमजोर छ । त्यसैले सुरुआती चरणमा यी प्रदेशका पालिकाहरूबाट कार्यसम्पादन मापन विधि लागू गर्ने र बिस्तारै सबै पालिकामा विस्तार गर्ने नीतिमा जान आवश्यक छ । सम्बन्धित प्रदेशले यो काम आफैं पनि गर्न सक्छन् । तर यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय आयोग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय संघ/महासंघका बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता
संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका लागि अन्तरतह सम्बन्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथाबाहेक इन्जिनयुक्त गाडी कुदाउन पेट्रोल/डिजेलको अपरिहार्यता भएजस्तै अन्तरतह सम्बन्धले संघीय शासन प्रणालीलाई चलायमान गराउँछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ । अन्तरतह सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन संविधान र कानुनमा विभिन्न संस्थागत संरचनाको व्यवस्था छ, जुन हुन्– अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समिति आदि । तर अपेक्षित रूपमा यी संरचनाहरू त्यति क्रियाशील छैनन् ।
नियमित रूपमा बैठक बस्ने, बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि चुस्त सचिवालय बनाउनेलगायतका कामहरू हुन सकेका छैनन् । २०७५ मंसिर २३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्ले गरेका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयनका आधा निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन नभएकामा मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनमा छ । यसै गरी विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको अध्यक्षताको विषयगत समितिको व्यवस्था छ । तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका विषयगत क्षेत्रका समस्याहरू विषयगत समितिले एवं कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलगायत सबै खालका समस्याहरूको समाधान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने जिम्मेवारी कानुनले यी संस्थालाई दिएको छ ।
यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ । एकाध प्रदेशमा परिषद् सक्रिय भए पनि अधिकांशमा प्रभावहीन छ । साँच्चिकै विकास–निर्माणलगायतका काममा समन्वय र सहकार्यका आधारमा मुलुकलाई द्रुततर रूपले अगाडि बढाउन र संघीयताप्रतिको नागरिकहरूको अपनत्वमा अभिवृद्धि गर्नका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्थाहरूको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी छ । यसलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि खासै बजेट पनि आवश्यक पर्दैन, केवल सरकारको प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो हो । यस्तो प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारको पनि हुन जरुरी छ ।
योजनाहरूको दोहोरोपना हटाउने
संविधानको मूलभूत लक्ष्य हो— विकास, समृद्धि र सुशासन । तीन तहका र बहुमतको सरकार हुँदा पनि नागरिकका अपेक्षाअनुसार परिवतर्नको अनुभूति हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रूपले बढी स्रोत र साधन सबभन्दा पछाडि परेको र पारिएको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सुगम क्षेत्रमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको छ । दूरदराजमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन् तर ठूलठूला सहरी क्षेत्रहरूमा भ्युटावरहरू बन्दै छन् । संविधानतः संघीय सरकारले हाइड्रोपावर, अन्तरप्रदेश सडक, सिँचाइ, रेल, हवाई उड्डयनजस्ता ठूलठूला परियोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो ।
प्रादेशिक खालका परियोजनाहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने संविधानको आशय हो । तर संघीय सरकारले नै पालिकास्तरका सानातिना काममा समेत हात हालेको छ । प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै सिको गर्ने गरेको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ । एउटै परियोजनामा पनि तीनै तहका सरकारको बजेटका कारण स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रम
कोभिडबाट प्रभावित वर्ग र क्षेत्रका लागि कुनै पनि तहको सरकारले सम्बोधन गरेन भन्ने गुनासो व्यवसायी र नागरिकको छ । कोभिडको पहिलो लहरमा गत वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली भारतबाट फर्किए । यो समस्या सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखियो । कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा पनि अवस्था यस्तै छ । तर हाम्रा सरकारले नागरिकलाई दुई–तीन महिना पनि गाउँमा टिकाउन सकेनन् । दसैं–तिहारको मुखमा कोरोना कहरकै समयमा फेरि रोजीरोटीकै लागि लामबद्ध भई नागरिकहरू भारततिर लागे ।
रोजगारी सृजनालगायतका लागि गठन भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यति प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारसँगको समेत समन्वयमा यी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनि कोभिडलक्षित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
ससर्त अनुदानका योजनामा सुधार
संघीय सरकारबाट पठाइएका ससर्त अनुदानका अधिकांश योजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरको समस्याको गाँठो फुकाउनेभन्दा पनि झन् बल्झाउने गरेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहहरूको छ । यस्ता योजना पठाउँदा त्रिपक्षीय छलफल (सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह) को आवश्यकता रहेको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । अबको बजेटमा ससर्त योजनामा रहेका विकृतिहरूको अन्त आवश्यक छ । ससर्त योजनाका सम्बन्धमा प्रदेशले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ ।
बजेट कार्यान्वयन तालिका
हामीकहाँ योजना तथा बजेटहरू कागजी भाषामा राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ । आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य छैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको पाटो साह्रै कमजोर छ । चालु आवको ६ महिनाको खर्च जम्मा २८.१९ प्रतिशत छ । अघिल्ला दुई आवको पहिलो ६ महिनाको खर्च प्रतिशत पनि यस्तै थियो (आव २०७५/७६ मा २८.६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा २७.६ प्रतिशत) । संघीय सरकारको खर्च प्रतिशत न्यून रहेको अवस्थामा प्रदेशमा चाहिँ छलाङ मार्ने अवस्थै रहेन । प्रदेशको जम्मा १५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा कर्मचारी र कानुनलगायतको समस्या छ । तर पनि खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।
अन्तमा, बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू, कार्यविधि र निर्देशिका असार महिनाभित्रै स्वीकृत गरी बजेट कार्यान्वयन तालिकाका आधारमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसै गरी हरेक निकायले असार मसान्तभित्रै वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणालीको सुरुआत गर्नसमेत आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले सरकारका असफलता शासन प्रणालीको असफलतासँग दाँज्ने आमप्रवृत्ति छ । यसलाई चिर्ने गरी तीन तहकै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी सतहमा देखिएका समस्याहरू समाधानार्थ लाग्न जरुरी छ ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:३९
कसैको उपचारका लागि देशैभरका विशेषज्ञ डाक्टरहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने तर कसैले अस्पतालमा बेडसम्म नपाएर मर्न पर्नुको कारण के हो ?
वैशाख २२, २०७८ सम्झना वाग्ले भट्टराई
देश किन बनेन र कसरी बन्न सक्छ भन्ने विषयमा विगत दशकहरूमा प्रशस्त बहस भए । यी बहसमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र र पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य, सम्पदा र संस्कृति तथा भविष्यको सम्भावित र अपेक्षित नेपालजस्ता विषयहरू हुन्थे । त्यहाँ उज्यालो, समृद्ध र सुसंस्कृत नेपालको चर्चा हुन्थ्यो ।
ती बहस र चर्चाले अवसर र सम्भावनाहरूको उजागर गर्थे र यी सबको आधारमा थियो— राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापना । तर लोकतन्त्र स्थापनाको बाह्र वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको छ, लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूलाई पंगु बनाइएको छ र आममानिसले आफ्ना दैनन्दिनमा लोकतन्त्रको रतीभर अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक नेपालपछि आम मानिसका मनमा उदाएका आशा र विश्वास हराएका छन् । किन त ? यसका प्रमुख कारकहरूमा छन्— राजनीतिक पार्टीहरू, कर्मचारीतन्त्र एवं बुद्धिजीवीहरूको प्रवृत्ति र व्यवहार ।
नेपाली राजनीतिको यो स्तरको क्षयीकरण विगतमा पनि सायद कहिल्यै भएको थिएन । विकृत राजनीतिक कथामा बनेका बलिउड तथा दक्षिण भारतीय सिनेमाले परिकल्पना गरेकाभन्दा पनि भयावह रूपले अराजनीतिक बनेको छ नेपाली राजनीति । राजनीतिक दलका नेताहरूले एकअर्कालाई लगाउने आरोप, अभिव्यक्तिमा प्रयुक्त शब्दहरू, सत्ता बचाउने र गिराउने क्रममा गरिएका निर्लज्ज अभ्यासहरू आदि देख्दा लाग्छ— अब नेपाली राजनीतिमा मूल्य र मान्यताको अस्तित्व बाँकी छैन ।
भ्रष्टाचार, सांसदहरूको किनबेच, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणजस्ता विकृतिहरू सामान्य बनाइए । अरू त अरू, सुरक्षा निकायको पूर्वप्रमुखजस्तो व्यक्तिलाई अपराधमा र अपराध आरोपमा दर्जनौं मुद्दा खेपिरहेकालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराइयो । महामारीजस्तो मानवीय संकटको समयलाई अकुत कमाइको अवसरका रूपमा लिइयो । नेतृत्वको देवत्वकरण र स्तुतिगान गरेबापत अयोग्यहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइयो, राज्यस्रोतको दोहन गराइयो र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थाहरूलाई बेकामे बनाइयो ।
यी सबको परिणाम हामीले मात्र होइन, आउने पुस्ताले पनि भोग्नुपर्ने प्रबल सम्भावना छ । अहिलेको राजनीतिले त्यस्तो उत्तराधिकारी हुर्काएको छ जो रूप र सारमा वर्तमान नेतृत्वभन्दा कुनै अर्थमा फरक लाग्दैन । समयका विविध कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू सिसिफसको नियति बेहोर्न अभिशप्त छन् । र त राजनीतिक उपलब्धि केही कालखण्डमा शून्यभन्दा तल गएको महसुस हुन्छ ।
झन्डै एक महिनाअघि महामारीले रोजगारी गुमाएका युवा वर्गलक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबारे एउटा छलफल आयोजित भएको थियो । प्रदेशस्तरीय त्यस कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवसहित अन्य विषयविज्ञ पनि सहभागी थिए । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिबारे प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको सभाहलमा मन्त्रालयका सचिव अलि ढिलो गरी प्रवेश गरे र बीचमा प्वाक्कै बोले, ‘यो छलफलले कुनै परिणाम दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई ? खासमा हाम्रा युवाहरू यहाँ कुनै उद्यम–व्यवसाय गर्नभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।
यो महामारी खासमा एउटा बहाना मात्र हो । मलाई त यो छलफलभन्दा पनि हाम्रो मोही–मकै खाने कल्चर कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।’ सहभागीहरू जिल्ल परे, कार्यक्रममा मोही–मकैले कसरी प्रवेश पायो भनेर । तर सचिवका अगाडि कसले के बोल्ने ? उनले मोही–मकै माहात्म्य एक छिन सुनाए । सहभागीहरूले पनि बिस्तारै ‘होमा हो’ मिलाए र त्यस दिनको रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको छलफल त्यत्तिकै टुंगियो ।
पछि थाहा भयो, त्यसै दिन कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो खाने बानी र मोही–मकैको प्रसंग सुनाएका रहेछन् । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीका ठूला प्रशंसक सचिवले रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको छलफललाई ‘मोही–मकै’ मय बनाइदिए । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको एउटा उदाहरण हो यो । यदि त्यसो नगर्ने हो भने सायद कर्मचारीलाई पनि एक ठाउँमा छ पटक सरुवा गरिन्छ । त्यसैले त कर्मचारीहरू पनि रोजगारी सृजना, महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्नभन्दा ‘सीतारामको मूर्ति प्राणप्रतिष्ठा’ मा खटिन सहज महसुस गर्छन् ।
अहिले देखिएको राजनीतिक अभ्यासका आधारमा भन्दा— नेपालमा राजनीति गर्नु भनेको राज्यस्रोतको अनधिकृत दोहन गर्नु र बेलगाम बोल्नु हो । नेताहरूको अनधिकृत व्यवहारबारे माथि नै चर्चा गरियो, बोलीमा शून्य जवाफदेहीका प्रमाण पनि यत्रतत्र भेटिन्छन् । समृद्धि र विकासको रटान त राजादेखि हरेक नेतासम्मले लगाएकै थिए, अहिलेका प्रधानमन्त्री त महामारीजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अप्रमाणित कुराहरू गरी पछौटेका तालीमा मक्ख परिरहे ।
नेता होऊन् वा बौद्धिक वर्ग, सर्वज्ञानसम्पन्न कोही हुँदैनन् । विषयविज्ञले राजनीतिकर्मीलाई सही सल्लाह दिनुपर्ने हो । आफ्नो विज्ञताको विषयमा तथ्य र खोजका आधारमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र आममानिसलाई सुसूचित गर्ने काम बौद्धिक वर्गको हो । तर समकालीन नेपालका अधिकांश बौद्धिक यसो गर्दैनन् । उनीहरू नेताका बेतुके र बेलगाम बोलीलाई पुष्टि गर्न र व्यक्तिमा विश्वविद्यालय खोज्न पसिना बगाइरहन्छन् अनि लाभका पद प्राप्त गर्न र्‍याल काढिरहन्छन् । अब यस्ताको ‘बौद्धिक’ कर्मबाट के प्राप्त होला ?
भोलिका नेता, कर्मचारी र बौद्धिक वर्ग
वर्तमान समाजको प्रतिविम्ब सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्ट देखिन्छ । विभिन्न दलका नेता, उच्च कर्मचारी तथा बौद्धिक वर्गको पक्ष र विपक्षमा भिड्नेहरू देख्दा लाग्छ— उनीहरूको छुट्टै अस्तित्व नै छैन । उनीहरू तिनै नेता, कर्मचारी तथा बौद्धिक वर्गका छुट्टाछुट्टै ‘क्लोनिङ’ हुन् । मानव विकासक्रममा स्वाभाविक र सित्तैंमा पाएको ‘न्यूनतम विवेक’ पनि स्थायी बन्धकीमा राखेर एकअर्काका पक्ष–विपक्षमा भिड्नेहरू भोलिका नेता, कर्मचारी र बौद्धिक हुन् । र भोलिका हामी पनि यिनैबाट शासित हुन अभिशप्त हुनेछौं ।
सर्वसाधारण र भोलिको समाज
माथि उल्लिखित पात्र र प्रवृत्ति प्रभावका हिसाबले यत्र–तत्र–सर्वत्र छाएका छन् । तर देश उनीहरूको बपौती होइन, अनधिकृत कब्जा जमाएका मात्र हुन् । उनीहरूबाट शासित र प्रताडित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट तर मौन छ । सानो हिस्सा नै सही, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र तथा बौद्धिक वृत्तमा आम मान्छेको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू छन् ।
आममानिसको अबको कार्यभार अनुचित प्रभावमा नपर्नु हो । भाषणबाजीमा होइन, व्यवहारमा राजनीतिकर्मीको परख गर्नु हो । त्यसैले प्रश्न सोधौं र चित्त बुझ्ने उत्तर नपाउन्जेल सोधिराखौं । महामारीका कारण भोकले मलर सदा मर्दै गर्दा सत्तानजिकका व्यापारीले कसरी अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सके ? एउटै देशको सीमाभित्र जन्मे–हुर्केर पनि कसैको उपचारका लागि देशैभरका विशेषज्ञ डाक्टर एकै ठाउँमा जम्मा हुने तर कसैले अस्पतालमा बेडसम्म नपाएर मर्न पर्नुको कारण सोधौं । कुनै मनकारीले भोकभोकै मर्दै गरेकाहरूलाई खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना बाँड्दै गर्दा, छेवैमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्दै उत्सव मनाउने नैतिकताबारे प्रश्न गरौं ।
महामारीले रोजगारी गुमाएर भोकभोकै सडकमा भौंतारिएका मजदुरहरूलाई पचास वर्षअघिको ऐनअनुसार कारबाही गर्ने तर वर्षौं लामो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान उल्लंघन गर्ने नेतालाई कारबाही नहुनुको कारण सोधौं । आमसभामा शक्ति देखाउन दर्जनौं बस रिजर्भ गर्न सक्नेहरूले सयौं किलोमिटर पैदल घर फर्कन अभिशप्त जनताका लागि यातायातको व्यवस्था गर्न किन रुचि देखाएनन्, सोधौं । अस्पताल निर्माणको सट्टा सीतारामको मन्दिर निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्‍यो, सोधौं । यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नको उत्तर नपाएसम्म प्रश्न गरिरहौं र उत्तरमा चित्त नबुझेमा उनीहरूलाई बहिष्कार गरौं । यति गर्ने हो भने आम अपेक्षाअनुसारको देश बन्न अनन्त प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:३३
दुर्गा कँडेल छत्कुली